सुन्दै अचम्म लाग्दो ! शौचालयकै लागि घण्टौँ लाइन
घरायसी कामभन्दा गाह्रो छ जुम्लाबासीलाई शाैचालय जाने काम !
| 2018-05-03 Published
निर्माण सञ्चार, कर्णाली प्रदेश । सुन्दा पनि अचम्मै लाग्न सक्छ । जुम्लाका नागरिकको हरेक बिहानी शौचालय कहाँ गर्ने भन्ने चिन्ताबाट सुरु हुने गरेको छ ।
खुला दिशामुक्ता जिल्ला घोषणा गरेसँगै शाैचालयकै लागि दैनिक घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ उनीहरुको ।
नेपालको ३५ औँ जिल्लाका रुपमा जुम्लालाई खुल्ला दिशामुक्त जिल्ला भनेर घोषण गरिसकिएको छ ।
लगभग ६० घर रहेका यहाँका सयौँ नागरिक अझै शौचालयविहीन छन् ।
शिक्षित र हुनेखानेहरुको बसोबास भएकाे जुम्ला सदरमुकाममै शौचालयको टड्कारो समस्या छ ।
चन्दननाथ नगरपालिका ५ का ज्ञानबहादुर वि.क को परिवारलाई हरेक दिन बेलुका सुतिसकेपछि भोलि बिहानको काम धन्दाभन्दा बढी सौचालय गर्ने चिन्ताले सताउँछ । किनकी घरमा शौचालय छैन खुल्ला सौचालय गर्न पाँइदैन ।
विकले भने, ‘टोलमा भएको एउटै शौचालयमा जो पहिले पुग्यो, त्यसैले शौच गर्न पाँउछ ।’ उनले थपे, ‘शौच गर्नकै लागि भएपनि एकाबिहानै उठ्नुपर्छ, आफूलाई शौैच लागेको बेला शौैचालयमा घुइँचो हुन्छ । घरमा शौचालय बनाउने जग्गा पनि छैन । बिहान शौच गर्न लामबद्ध भएर घण्टौं बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
यस्तो अवस्था जुम्ला सदरमुकाम स्थित ५ कालेखोली लाइनको हो । ज्ञानबहादुर जस्तै जिल्ला सदरमुकाममा अवस्थित कालेखोली टोलका ६० घरपरिवारले विगत धेरै वर्षयता एउटै शौचालय प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
सबै टोलबासीले एउटै शौचालय प्रयोग गर्दा घण्टौं लाईनमा बस्नुपर्ने बाध्ययता रहेको चन्द्रलाल सुनारले बताए । दलित समुदायको बाहुल्य रहेको उक्त टोलका स्थानीयले एउटै सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्दै आएपछि यस्तो समस्या भोग्नु परेको हो ।
थानिय हजमा वि.क ले भनिन्, ‘शौचालय निर्माणका लागि हामीसँग जग्गा छैन । सार्वजनिक शाैचालयमा हुल गरेर सौच गर्न लाज लाग्छ, तर बाध्यता छ । आफ्नै घरमा शौचालय बनाएर आरामले सौच गर्ने कसलाई चाहाना हुन्न ।’
आधुनिक शौचालय निर्माणपछि कालेखोली टोलका समुदयायले भोग्दै आएको शौैच गर्ने समस्या केहीहदका लागि हट्ने वडा अध्यक्ष कठायतले बताए ।
७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएकोले वैशाख मसान्तसम्म शौचालय निर्माण गरी समुदायलाई हस्तान्त्रण गरिने उनको भनाइ छ ।
दुईतलामा निर्माणाधीन शौचालय माथिल्लो ६ कोठा सौच गर्नका लागि र तल्लो तलामा ब्यापारिक प्रयोजनका लागि दुईवटा सटर बनाइएका छन् ।
टोलभरीका स्थानीयले प्रयोग गर्दे आएको सार्वजनिक शौचालय पुनः निर्माण भैरहेकोले तत्कालका लागि समस्या भइरहेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर विश्वकर्माले बताए ।
ज्ञानबहादुरले भने, ‘शौचालय निर्माण सम्पन्नपछि चौकिदारको ब्यवस्था गरीने छ । सोही टोलका ६० घरधुरीले निशुल्क र अन्यले न्युनतम शुल्कमा सौच गर्नेछन् ।’
शौचालय चन्दननाथ गुठीको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएको छ ।
सार्वजानिक शौचालय निमार्ण भएन
तातोपानी २ निवासी कन्न कामी, गएको हप्ता सदरमुकामले विशेष कामले आए । बीच बजारमा पुग्दा उनलाई अचानक पेट काट्यो । अनि यता उता शौचालयको खोजी गरे तर, कतै भेटाएनन, पहिलेको सार्वजानिक शौचालयमा भत्किएको थियो ।
कामीले भने, ‘हतार हतारमा आधा घण्टा दौडेर तिला नदीमा पुगेर शौच गर्नु पर्ने अवस्था आयो ।’ सदरमुकामै यस्तो समस्या हुनु जिल्लाकै प्रतिष्ठान माथि आच आउने खाले काम भएको उनको भनाई छ ।
सदरमुकाममा आएर शौचको समस्या भोग्ने कन्न कामी एक उदाहरण हुन यहाँका सयाैँ नागरिक यस्तै समस्याबाट पीडित छन् । जुम्ला सदरमुकाम उद्योग बाणिज्य संघ नजिकै महिला पुरुषको छुट छुटै शौचालय थियो । जसले सदमुकामबासीदेखि गाउँबाट आउने स्थानीयको लागि निकै सहज भएको थियो । तर गएको वर्ष शौचालयलाई भत्क्याइयो ।
त्यसको विकल्पमा अहिलेसम्म कतै निमार्ण भएको छैन् । शौचालयनै नहुँदा एकातर्फ सदरमुकामबासी त पीडित छन् नै तर गाउँबाट आउने स्थानीय नागरिकहरुको पीडा त झनै छ ।
सदरमुकाम बिच बजारमा आउँदा दिशा पिसाब लाग्यो भने सिधै आधा घण्टा हिँडेर तिला नदी अथवा जुगाड खोलामा दौड्नु पर्ने अवस्था छ ।
पुरानाे भएको शाैचालय भत्काएर नयाँ निमार्णका लागि स्थानीय सरकार आइसकेपछि पनि कुनै पहल नहुँदा स्थानीय आक्रोशित छन् ।
उद्योग वाणिज्य चन्दननथा नगरपालिकाले यसमा खासै चासो दिएको पाइँदैनन् । मानवीय सामान्य आवश्यकताभित्र पर्ने शौचलाई पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्ने स्थानीय सरकारले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा कसरी देला कुनै आशा भरोसा नरहेको सदरमुकामबासी कृष्ण रावलले बताए ।
उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामदत्त रावलले चाँडै सार्वजानकि शौचालय निमार्णका लागि पहल गर्ने बताए । नगरपालिकासँग समन्वय गरी सदरमुकामभित्र झण्डै ५ वटा शौचालय निमार्ण गर्ने उल्लेख गरे ।
चन्नदननाथ नगरपालिकाकी मेयर कान्का सेजुवालले, नगरपालिका भित्रका सम्बन्धित वडा अध्यक्षलाई सार्वजानिक शौचालय निमार्णका लागि निर्देशन दिने बताइन ।
उनले भनिन्, ‘कालेखोली लाइनका घरधुरीमा शौचका लागि देखिएको समस्याप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ ।’ उनले थपिन, ‘कसरी हुन्छ, जग्गा नभएकाहरुलाई व्यवस्थापन गर्न तर्फ लाग्नेछौँ ।’
बिहीबार २०, वैशाख ०७५